Uhlobo locansi: wazi kanjani ukuthi uyamjabulisa?
Iqiniso lokuthi owesifazane uthanda izindlebe, nomuntu onamehlo, uyaziwa kuwo wonke umuntu. Kodwa-ke, kunamagama angakwazi "ukulala" embhedeni noma yimuphi ummeleli wesondo oqinile. Imishwana elula neyinkimbinkimbi efana ne-movie: "Woza, sizokwenza kanje" noma "Ngikukhumbula kakhulu" - basiza kuphela kumafilimu e-Hollywood. Namuhla, izazi zengqondo ziyazi kahle ukuthi uhlobo ngalunye lomlingiswa luphendula kuphela emaqenjini athile amazwi ...
Wonke umuntu unalo uhlobo lwakhe locansi - ukuthi ungathola kanjani ukuthi uyamjabulisa, ochwepheshe baphakamisa. Bahlukanisa bonke abantu babe yizibukeli, izisindo nezikhulumi - ngokusho ukuthi yiziphi iziteshi zokubona ezibaluleke kakhulu kubo. Kukhona abantu ababaluleke kakhulu kunalokho abakubona ngamehlo abo, kunalokho abakuzwayo. Ukuze "uthole" umuntu onjalo (nangendlela, amadoda amaningi - okubukwayo), kumele ubonise izingubo zangaphansi ezibucayi noma isithombe esingenakuqhathanisa. Uma ngabe lokhu kungenakwenzeka, futhi wena, isibonelo, wanquma ukukukhanyisa ngocingo, kufanele ukhulume ukuze amagama akho aveze izithombe ezibonakalayo phambi kwamehlo akho. Isibonelo: "Ngilalela embhedeni wethu omkhulu, kimi - emasakeni omnyama kuphela."
Uma intandokazi yakho izwa, yilokho akuzwayo kubalulekile kuye. Esikhathini esifanayo - ukukhohlisa efonini - udinga ukumtshela into efana nalokhu: "Kukhona umculo othulile, futhi ngiyakhumbula umoya wakho ophefumulayo ..."
I-Kinestetik ibona umhlaba ngemisipha nesikhumba, izipikili nezinwele. Ukhumbula izinzwa, ukunyakaza, kuthinta. Kudingeka atshele into enjengale: "Ngiyaqhwaza ngezingubo zangaphansi, ngiboya izinwele eziminyene entanyeni yami egijima ngomoya ophefumulayo."
Ubani yena, indoda yakho?
Ukuze unqume ukuthi yisiphi isiteshi sokubona umholi womuntu wakho othandekayo, uyini uhlobo lwakhe locansi, khuluma naye mayelana nokuhamba okuthile okubili owakhumbula kahle. Futhi wazi ukuthi yimaphi amagama achaza lokho akubonayo. Ingabe ukhuluma ngezithombe zemvelo (okubonwayo), noma mayelana nokucula izinyoni (ngokuzwakalayo), noma ukhumbule ukuthi uhambe kanjani, futhi ubambe isandla sakho (ububele). Ngakho ungathola ukuthi yini eyamjabulisa.
Amanye amagama noma izenzo zingaba yindoda yakho ethandekayo okuthiwa "ihange". Khona-ke kuyoba ngokwanele ukukhuluma leli gama, ukwenza isenzo, ukukhiqiza noma iyiphi imininingwane yaleso simo, ukuthi isifiso sakhe siyovusa kanjani. Ake sithi, lapho eqala ukuvuma kuwe ngothando, kwakukhona iphunga lama-lilacs esanda kukhula, futhi iphunga elimnandi lalihlala "libopha" engqondweni yakhe ngokuhlangenwe nakho okunamandla kakhulu. Noma othandekayo wakho njalo ujabule kakhulu lapho ushaya amazwi athile kuye - labo abaye bamthinta kakhulu. Futhi manje, ngokushesha nje lapho ezwa, akakwazi nje ukuzivimbela.
Esimweni esithile (kulolu cala - ukuthinta umkhonto nesigcawu esithile), umuntu ngokushesha unikeza umphumela wokugcina, lowo ojwayele ukuwusebenzisa.
Abantu abaningi abasoli ngisho nokusola ukuthi banento ethi "ihange", kuze liphele. Isibonelo, owesifazane oyedwa wabuya ngokushesha lapho umyeni wakhe emhlekisayo emlonyeni, ehamba ngemuva kwakhe. Kodwa kusukela ngandlela-thile wayeka, futhi usevele eqala ukukhathazeka ngesihloko: "akangithandi." Ngemva kokuphelelwa inyanga, wathi kuye: "Awusho amazwi amnandi kimi." Umyeni wami wamangala futhi wamkhumbuza ukuthi manje, njengoba nje izolo ... Yebo, ngishilo, kodwa kwakungekho umphumela. Futhi-ke kuphela lo mbhangqwana ungathola ukuthi umyeni wayevele ephuce intshebe yakhe, futhi izinwele azizange zishaye isikhumba esibucayi entanyeni yomkakhe. Ihange, elivusa ngokushesha lona wesifazane, lisusiwe. Kwadingeka ngiphinde ngikhule umuntu futhi ngiphinde ngikhulume amagama amathenda amathathu - ukubuyisela umphumela.
Ithiphu: qaphela ngokucophelela ukuthi umlingani wakho uphendukela kanjani kumazwi athile nezimo ezithile. Mhlawumbe, igama elilodwa noma i-intonation, ukuphefumula noma isenzo kuye kuyisikhonkwane esinamandla, okuyindlela ngezindlela eziningi okufakazela ekufinyeleleni kwe-orgasm.
Phrinta kuze kube phakade
Ngakho-ke, bonke abantu bancike ekutheni "banamathele" kungakhathaliseki uhlobo lwabo locansi - ukuthi bangathola kanjani lokho okuthakazelisayo, usuvele uyakwazi. Manje mayelana nokuthi "ungalungisa" kanjani umphumela oyifunayo. Isikhonkwane singabonakala ngokuzenzekelayo, futhi singakwazi "ukuhanjiswa" ngokukhethekile. Ukuze wenze lokhu, udinga ukwenza izinto eziningana:
• khumbula ukuthi yini ngempela indoda yakho eyithandayo kakhulu kuwe;
• ukudala lesi simo noma isimo;
• khetha amagama noma izenzo ezithile eziqhakazile, iphunga noma izithombe ezibukwayo ezizoqinisa;
• Yenza uthando ukuze ihange lakho elikhethiwe liwe phansi ekugqibeleni okukhulu kakhulu kokuhlangenwe nakho kwakhe. Isibonelo, amanye amadoda ayayithanda lapho eqala izipikili zawo ngemuva. Zama ngesikhathi esithintekayo kakhulu socansi lwakho, faka izinhlayiya zakho ngemuva bese uthi amanye amagama. Ngisho noma kungewona okwehluleka kakhulu. Kodwa, yebo, akusilo "ifosholo", kodwa into efana ne "darling".
• Phinda lokhu izikhathi eziningana ukuze wenze umqondo wokuthi "ushicilelwe" (igama lesiNgisi elithi "imprinting") engqondweni yakhe.
Khona-ke ungasebenzisa lesi sihange ekuphileni kwakho kwansuku zonke. "Othandekayo, ake siye kumama ngeveke ngempelasonto," - neleyili ngekhati - i-stud. Futhi yilo kanye lelo gama emlonyeni wakho. Ukhumbula ngokushesha umzwelo wokuzijabulisa ngokocansi, futhi amathuba okuvuma ukuya kumama wakho ekuvakasheni uzoba nokuningi okuningi.
Zama ukungabi namahange anembile. Noma yikuphi ukuhlambalaza okuhlambalaza noma ukungenwa kokuhlukunyezwa kungaba kalula. Futhi ukuphikisa noma yisiphi isifiso hhayi nje kuphela ukulala ndawonye, ​​kodwa futhi nokuhlala ndawonye.
Indoda enothando ikholelwa wena ngokungenamthetho, njengengane yomama. Futhi wonke amazwi akho athatha ngokoqobo. Kungaba kuhle uma kungeyona indawo eyodwa yowesifazane. Isibonelo, ujikeleza phambi kwesibuko bese uthi: "O, ngiye nginamafutha!" Ulindele ukuthi othandekayo uzoqala ukuphikisa noma okungenani aduduze: "Uju, ngizokuthanda nokuphila kwami ​​konke." Uthi lokhu okokuqala, bese kuthi okwesibili, ke okwesithathu. Sijwayele 'ukumncenga' ukuze siyancoma, futhi yena ... uqala ukuthatha izwi lethu kulo. Ngakho-ke noma ngabe unesisindo esingu-46 kg nesisindo samamitha angu-176, uzoqala ukucabanga ukuthi "unamafutha" uma uphinda njalo.
Ithiphu: ngokuphikisana nobudala, ukuma nokukhanya, ukukhononda kuphela kubangani noma kumama. Othandekayo kufanele athumele ukwehluleka kwakhe njengezinto ezincane ezincane. Isibonelo, "Nginombongolokazi," hhayi "izintambo ezinzima." Futhi "owesifazane kufanele abe yisiteji" uma uthola kunzima ukuzuza isisindo. "Ngamehlo ami ukuxazulula ukuhlakanipha" - uma ukhangwa ukukhononda ngemibimbi ezungeze amehlo. Kuzo zonke iziphutha umuntu angathola izinzuzo futhi azilethe efomini elungile.
Ukukwazi nomfana ocansini
Ubulili emva kokubeletha: izinkinga
Kungani amadoda adinga ubulili ngaphezulu?
Isikhathi esihle somthandi
UKsenia Sobchak wakhuluma ngokukhulelwa kwakhe ku-Twitter
Okuqukethwe kwama-acids e-polyunsaturated ebalulekile (i-PUFA) emafutheni omifino
U-Natalia Ionova wakhulisa izinga lakhe lamasiko, isithombe
Yiluhlobo luni lwezipho amadoda akhungathekile ngamadoda
Inhlangano enengqondo yomsebenzi
I-Cottage ushizi casserole nge-chocolate
Zonke izimfihlo ze-geisha
Amakhukhi kaKhisimusi ane-cranberries